Warshadaha Shiinaha ee Soo Diraya Wool Felt iyo soo saareyaasha | Huasheng
Wuu jeexjeexay Suufka
Inta ugu badan fiberka loo isticmaalo in lagu cadaadiyo waa dhogor. Xarkaha dharka dhogorta waxay leeyihiin xirmooyin yar yar oo dusha sare ah, kuwaas oo gacan ka geysanaya xiritaanka dabiiciga ah ama geeddi-goynta.
Saqafka dhogorta leh ee la dareemo waxaa lagu sameeyaa geeddi-socod khafiif ah oo badanaa loo yaqaan 'ka-shaqeynta qoyan'. Fiberka waxaa si wada jir ah looga shaqeeyaa cadaadis, qoyaan, iyo gariir, ka dib waxaa loo calaameeyaa oo loo calaamadeeyaa si loo sameeyo lakabyo badan oo maaddooyin ah. Dhumucda ugu dambaysa iyo cufnaanta sheyga ayaa go'aamiya xaddiga lakabyada ka dib la soo dejin karo, la qoyn karo, la cadaadin karo oo la sii adkeyn doono.
Tilmaamidda Wareejinta Wool ee La jeexay
Nooca T112 112 122 132
Cufnaanta (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35
Adag (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50
Darajada Wool Austino Merino Wool Wool Shiinaha
Midab Caddaan Caddaan / cawlan / madow ama midab leh Pantone
Shahaadada ISO9001 & SGS & ROHS & CE, iwm
1.Xaqiijin. Xargaha fiber-ka ayaa si adag loogu xirxiraa mana furfuri doono.
2.Caabbi iska caabin ah. Suufka la riixey ayaa dareemay qaab dhismeed adag kaasoo ah iska caabin baabi'inta.
3.Aad u nuug badan. Saqafka dhogorta leh ee la riixay ayaa leh maqnaansho aad u sarreeya oo biyo ah.
4.Dab-damis. Wool wuxuu dareemay inuu dabiici ahaan dab-damin karo, taasoo awood u siineysa nolosha dheer ee adeega waxaana loo adeegsan karaa aagga guban kara.
5.Dabiiciga iyo hypo-allergenic. Dhammaan walxaha dhogorta dhoobada dareemay waa dabiici ah oo aan lahayn wax kiimiko ah ama shey kale oo waxyeelo leh.
6.Qaylada hooseeya Saxaafadda dhogorta leh ee la dareemo in lagu isticmaalo alaabta guriga waxay yareyn kartaa dhawaqa waxayna ilaalin kartaa sagxadda.
7.Lagu Sameeyay Dhumucda, midabada iyo cabirrada dhogorta dhogorta leh ee la dareemay waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
1) Qubaysleyda, xirmooyinka suufka, bustaha, goynta, xiridda albaabka, dariishadaha daaqada, qalabka wax lagu cabiro ee gariirka, guluubka jilicsan, giraangiraha iyo pads, grommets.
2) Jiid gogosha loogu talagalay tirtirka birta, iyo jilicsanaanta polishing, giraangiraha iyo pads, dhawaqyada dhawaaqa jabaqda, xamuul, miisaska daabacaadda shaashadda, shaandhayaasha, nuugista, kubbadda iyo kuleylka lagu rito qashinka saliidda iyo qashin-yarida ka reeban, goynta, xargaha , wareegga / wareejinta dareeraha.
3) Gaashaanka wasakhda ah, masaxayaasha, nadaafada musqusha, weelka maydhashada, kor u qaadida gariirka, guluubka isku buuqsan, qalabka gubashada, saliidaha, milkiilayaasha dufanka, guntimaha rinjiga, miirayaasha sharoobada, boodhadhka orthopedic adag, iyo adeegsiga kale ee adkeysiga dareemka looga baahan yahay.
Hore: Kubadda Suuliga ee Wool
Xiga: Polyester Felt